Wasiir Carbeed oo xilkiisa ku waayay Wareysi caro badan abuuray uu bixiyay !! – ASM Raage
Wasiirka arrimaha dibedda ee Lubnaan, Sharbal Wahba, ayaa iska casilay xilkiisa kadib cadaadis xooggan oo ka dhashay waraysi uu ku weerarray dalalka Khaliijka.
Sharbal Wahba oo ka tirsan xukuumadda xil-gaarsiinta Lubnaan ayaa waraysiga uu Isniintii siiyay telefishinka Al-Xurra waxa uu ku tilmaamay in dalalka Khaliijka ay gacan ka geysteen hanaqaadkii ururka Daacish.
Sacuudi Carabiya, Kuweyd, Baxrayn iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhammaan u yeeray safiiradda Lubnaan u fadhiya caasimadahooda, waxaana ay u muujiyeen cabashadooda ku aaddan hadalka wasiirka.https://b8bc554419712569c71ef1e36f78ded7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
“Dalalka aan jaceylka, saaxiibtinnimada iyo walaaltinnimada wadaagno ayaa keenay Daacish. Waxa ay noogu beereen banka Ninawa, Anbar iyo Palmyra,” ayuu yiri wasiirku.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Sacuudiga ayaa sheegtay in hadalka wasiirku uu meel ka dhac ku yahay nidaamka diblomaasiyadda, uuna weerar cad ku yahay Boqortooyada.
Hadalka wasiirka ayaa khalkhal geliyay dedaallada ay Lubnaan ku dooneyso in ay ku wanaajiso xiriirka kala dhexeeya waddamada Khaliijka oo mar ahaa kuwa dhaqaalaha ugu badan ku bixiya dalkaas la liicaya sicir bararka xooggan.
Waddamada Khaliijka ayaa ka caga-jiidaya in ay soo celiyaan taageeradii dhaqaale ee ay ku bixin jireen Lubnaan iyagoo ka walaacsan awoodda sii kordhaysa ee ururka Xisbullah uu ku leeyahay siyaasadda dalkaas.
Madaxweynaha Koofurgalbeed Cabdicasiis Laftagareen oo soo gaaray magaalada Muqdisho